Mid ka mid ah ciyaartoyda dunida ugu caansan oo ay qabsatey fadeexad culus+ Sawiro – SBC
News, Sports, Xulashada
Mid ka mid ah ciyaartoyda dunida ugu caansan oo ay qabsatey fadeexad culus+ Sawiro
Xidiga kubada cagta ee kooxda Manchester United Ryan Giggs ayaa mar kale soo fuulay hadal haynta ugu badan ee saxaafada ka dib markii ay ku soo baxdey fadeexad kale oo halis ku keeni karta sumcadiisa xaga ciyaaraha kubada cagta ee uu hantida ku yeeshay & waliba qoyskiisa.
Mid ka mid ah wargeyska sida weyn looga akhrtisto wadanka UK isla markaana faaqiqda amuuraha dadka caanka ah sida Fanaaniinta, Jilayaasha & Ciyaartoyda ayaa maanta soo bandhigey sheeko yaab iyo naxdin xambaarsan oo ah in ciyaaryahan Ryan uu xiriir mudo 8 sano ah jirey uu lahaa xaaska walaalkiis, tani oo noqonaysa dharbaaxadii labaad ee ku habsata sumcadiisa iyadoo kal hore ay ruxday fadeexadiisu wadanka Ingiriiska taasi oo xitaa keentey in lagu soo qaado fadhi uu lahaa Baarlamanka wadanka UK, ka dib markii muran uu ka dhashay soo bandhiga fadeexado gaarey heer maxkamadeed oo ku aadanaa in Ryan Gigs uu xiriir qarsoodi ah la lahaa haweenay lagu magacabaao Imogen Thomas oo ah mid ka mid ah Jilayaasha Filimka musalka ah ee caanka ah dalka Ingiriiska ee Big Brother.
Gigs & walaalkiisa ka yar ee uu qiyaanay Rdohir
Wargeyska News Of The World oo sheekadan fadeexada daaha ka qaaday ayaa sheegay in Ryan Gigs uu xiriir 8 sano jir ahaa la lahaa 28 jir Natasha oo ah xaaskaa walaalkiis ka yar Rhodri oo 34 sano jir ah, inkastoo xiriirkaasi mid jirey intii aanay is guursan Natasha & Rhodri, walow xiriirkaasi aanu dhamaan oo la sheegay in Gigs uu si qarsoodi ah ugu dhuuman jirey xaaska walaalkiis.
Gigs waxaa kale oo la yaab leh inaanu u sheegfin walaalkiis haweenay Natasha oo uu la lahaa xiriir mudo 8 sano kaasi oo ahaa xiriir ku saleysnaa nooc kasta oo ka mid ah nolasha, lamana oga ilaa iyo hada sababta walaalkiis uu daboolka uga saarey sheekada dhexmarey isaga & Natasha.
Wargeysku warbixinta uu qorey wuxuu ku sheegay in ciyaaryahan Gigs oo 37 sano jir ah xitaa habeen dhac uu la sameeyey Natasha 9-kii bishii April ee sanadkan, taasi oo muujinaysa in uu sii socdey xiriirka Natasha & Ryan Gigs.
Natasha & Rdohri xiligii macaanaa iyagoo ku maqan dalxiis
Mid ka mid ah dadka saaxiibka la ah Natasha ayaa u sheegtey wargeyska in Natasha had iyo jeer ay ka hadli jirtey xiriirka iyada Gigs waxaana hadalada laga hayaa ka mid ahaa “Waan ogaa inaan qalad galey, waana qiyaamada ugu weyn, waxaan isku dayey si kasta oo aan ku dhameyn karo ama ku soo afjari karo xiriirka aan la leeyahay Ryan, laakiin waa qabatimay, wax kasta oo uu iu dhaho waan sameeyaa, maba dhihi karo maya”.
“Ryan waxa kaliya ee uu iga doonayey waa ciyaaraha sariirta, mana jirin wax jaceyl kale oo uu ii hayey” ayey ku catowday Natasha, oo xiligii ay is baranayeen Gigs jirtey 20 sano, isal markaana isbarashadoodii ay ka dhacdey Kalaabka Super Lounge ee ku yaal magaalada Manchester oo ay ka dhisan tahay kooxda uu ka tirsan yahay ee Man United.
Nataasha gabadha Gigs dumaashidiis ah ee fadeexadu qabsatey
Fadeexada la soo daristey Ryan Gigs oo ah aabe 2 caruur leh waxaa laga cabsi qabaa inay inay ku keento sumcad dilkii ugu weynaa, iyadoo la xaqiijiyey in durbaba walaalkiis Rhodri uu ka tagey Natasha.
Wargeyska The Sun ayaa saaka qorey in Rdhori uu ka tagey xaaskiisii isagoo naxdin & qaracan ka qaaday fadeexada ku soo baxdey walaalkiis.
“Sabtidii waan la joogay laakiin waan ka tagey naagtaasi” sidaasi waxaa yiri Rdhori oo ay soo xigatey jariidada The Sun.
Gigs oo 130 kun oo doolar todobaadkii ka qaate kooxda Manchester oo mudo 10 sano ka badan uu ka tirsanaa waxaa uu weyn doonaa lacago malaayiin doolar ah oo uu ku helo sumcadiisa xaga ciyaaraha kubada cagta ah, waxaa ka mid ah in dib loo eegi doono heshiis 28 milyan oo doolar ku fadhiya oo uu kula jiro shirkada caanka ahe e Reebook, sidoo kale hishiiska uu kula jiro shirkada Cyma ee saacadaha farsameysa ayaa la filayaa in uu meesha ka baxo.
Sumcad xumadan ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelan karta heerka uu ka joogo kooxda Man United oo uu la qaaday 12 koob oo ay ka mid yihiin 3 koob oo Champion League ah, iyadoo laba filayey in uu noqon karo tababare kooxda layliya marka uu xamil gabo macalin Sir Alex Ferguson oo iminka da’a ah.
Fadeexadaha maalinba maalinta ka dambeysa ku soo baxaya xidigaha ciyaarta kubada cagta ayaa isa soo tarayaa, iyadoo goor sii horeysay xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo uu diidey in uu shaaciyo haweenay u dhashay wiil, taasi oo muran & nux nux hoose oo fara badan dhalisey.
Sidoo kale xidiga qaranka England & kooxda Man United Wayne Rooney ayaa ka soo kabanaya fadeexad dhaxashay in xaaskiisa Coolen ay isaga cararto gurigooda ka dib markii ay soo shaacbaxdey in isayadoo umul ah uu hotel kula sariir ciyaarey haweenay jirkeed ka ganacsato ah oo uu hal habeen siiyey $ 1700 USD.
Laacibka kooxda Tottenhan & qaranka England Peter Crouch ayaa si la mid ah fadeexadahaasi waxaa isagana lagu soo eedeeyey in uu haweenay jirkeed ka ganacsato ah uu hal habeen kula galgalashay $ 1200 USD.
Juun 8, 2011 at 4:00 pm
waa warbixin aan caadi aheyn, laakiin ninkan gigs maxaa qaaday walaalkay miyaan xaaskiisa wax ka dayi karaa gaalo waa taasi
Juun 17, 2011 at 3:15 pm
giggs waa nin wayn oo da,ah waxaana waaka suurtoobaan waayo wuxuu arkay saxibaatii oo waxaa samaynaya sida rooney ronaldo crouch marka waa inuu waxaa iska sameeyaa waa nin wayn oo doqon ah alla jaahanama ku geeeeeeeeeee………………
Juun 17, 2011 at 3:17 pm
giggs anaa u baahan waa
Juun 17, 2011 at 3:21 pm
ceeb badanaa war giggs waa nin wayn oo isku dardar samay muu nagaha kirada ah aado iimaan kii baa alla ka qaaday wuxuu arkay sxbatii oo waxaaa sameeyey sida rooney nonaldo crouch marka hayska sameeyo caqlikiisa saa siiyaye
Juun 18, 2011 at 7:31 am
awalba gaalay ahaayeen xaaraan iyo xalaaliba uma kala soocna.